कैलालीको क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको सामूहिक बलात्कार ! | नेपाल घटना
कैलालीको क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलाको सामूहिक बलात्कार !
प्रकाशित : ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार २०:११
लम्कीचुहा नगरपालिका-१ मा रहेको सहिद स्मृति माविको क्वारेन्टाइनमा रहेकी ३१ वर्षीया महिलाले आफू बलात्कारमा परेकाे भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन्।
कैलालीको एक क्वारेन्टिनमा बसेकी एक महिलाले आफू सामूहिक बलात्कारमा परेको बताएकी छन् । लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्वर १ स्थित शहीद स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा रहेकी ३१ वर्षीया महिलाले शनिबार मध्यरातमा समूहिक बलात्कार भएको भन्दै न्याय मागेकी हुन् ।
पीडित महिलाले क्वारेन्टाइनकाे व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी किशोर परियार, स्वयंसेवक लक्ष्मण परियार र सर्जन विकले गएराति करीब सवा १२ बजे बलात्कार गरेको पीडित महिलाकाे आरोप छ।
तर घटना लुकाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयबासीले आइतबार वडा नम्बर १ को कार्यालयसमेत तोडफोड गरेका छन् । स्थानीयको विरोधपछि प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतीक विष्ट भने, ‘जाहेरी परेको छैन, तर हामी अनुसन्धान गर्दैछौं ।’
पीडित महिला १२ दिनअघि भारतको बैंङ्ग्लोरबाट आएकी थिइन् ।
उनीसँगै कोठामा बसेकाहरु परीक्षण गरेर घर गइसकेका थिए । कोठामा एक्लै भएपछि आफूले एक्लै डर लाग्ने बताएको र अर्को कोठामा जान अनुमति दिइएको बताइन् ।
तर उनी गएको कोठाको ढोकामा चुकुल थिएन । ढोकामा बेञ्च राखेर भित्र सुत्न सल्लाह दिएपछि आफूले त्यसै गरेको उनले बताइन् । ‘सञ्चो थिएन, टाउको दुखिरहेको थियो । पछाडि झ्यालमा स्वयंसेवक आएर ढोका खोल्नुस् भन्यो’ उनले भनिन् ।
मध्यरातमा आएका स्वयं सेवकले ढोका खोल्न भन्दा आफूले नमानेको उनले सुनाइन् । कहिले झ्याल त कहिले ढोकामा आएपछि आफूले पनि गाली गर्नुका साथै पुलिस बोलाउन चेतावनी दिँदा पनि उनी नमानेको पीडितले बताइन् । त्यसपछि ढोका खोलेर के गर्न खोजेको भनेर प्रश्न गरेको उनले भनिन्, ‘उ पछाडिपछाडि सर्दै गयो र अर्को कोठाको ढोका नजिक गइसकेपछि मलाई भित्र पछ्यार्‍यो र ढोका खोलेर मलाई जबरजस्ती गर्‍यो ।’
अर्का स्वयंसेवक आएर भिडियो खिचेको उनले सुनाइन् । त्यही बेला एक स्वास्थ्यकर्मी आएपछि आफूले गुहार मागेको भन्दै उनले भनिन्, ‘अब मलाई सहयोग गर्छ भनेर दाइ बचाउनुस् भनेँ । तर उसले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्‍यो ममाथि ।’
भिडियो खिच्ने युवकले आफूसँग पैसा मागेको र नदिए भिडियो भाइरल गर्ने धम्की दिएको पीडित युवतीले बताएकी छिन् । उनले आफू स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तयार रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘ म बालबच्चा भएको आइमाई मान्छे हुँ । नभएको भए आरोप लगाएर बेइज्जत गर्नुपर्ने केही छैन ।’
बलात्कार गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ
क्वारेन्टिनमा बसेकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ परेका छन् ।
लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं १ मा रहेको सहिद स्मृति माविको क्वारेन्टिनमा रहेकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा ३ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रतीक बिष्टले बताए।
घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गदै लम्कीमा राजमार्ग अवरुद्ध पारिएकाे छ।
पीडित महिलाले क्वारेन्टिनमा स्वयंसेवकका रुपमा राखिएका तीन जनाले आफूमाथि बलात्कार गरेको बताएकी छन्।
शनिबार रातिको घटना भएपनि आरोपीलाई पक्रन ढिला गरेको भन्दै स्थानीयले आइतबार दिउसो प्रदर्शनसहित लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं १ को कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए।
महिला भारतबाट त्रिनगरनाका हुँदै २० जेठदेखि लम्कीचुहा नगरपालिकाले बनाएको लम्कीस्थित सहिदस्मृति माध्यामिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी थिइन्।
११ वर्षीया बालिकालाई भारतीय नागरिकले बलात्कारपछि हत्या गरेको पुष्टि
ललितपुरमा महिलालाई सापटी रकम लिन बोलाई जबरजस्ती करणी
अयोध्या नेपालमै पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उटपट्याङ हो : कमल थापा राष्ट्रिय
“अब ओलीलाई छाडा छोड्नु खतरनाक हुन्” : बाबुराम भट्टराई राष्ट्रिय
सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न :‘कति अनलाइन चाहिने हो हामीलाई ? राष्ट्रिय
दाउन्नेमा पहिरो खस्दा कार र ट्रक च्यापिए, पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध प्रदेश